Samsung Galaxy S3 တွင်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းကိုဖြေရှင်းနည်း Androidsis
Samsung Galaxy S3 ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Francisco Ruiz | | Samsung, Android cheat, လဲ tutorial
ပြနာ Samsung အပေါ် screen overlay ကိုပိတ်ပါ ဒါဟာရုတ်တရက်သေခြင်းတရားဆိပ်ကမ်းသက်ရောက်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာမျှမဖြစ်ပါတယ် Samsung ရဲ့ Galaxy S3, မော်ဒယ် GT-I9300 ရှိပြီးသားမှတ်ဉာဏ် chip ကို၏တိကျတဲ့စီးရီး Exynosအကယ်၍ သင်ဟာဒီအလွန်လေးနက်တဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemနာနှင့်၎င်းရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကြောင့်ထိခိုက်မှုခံရသူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မလားဆိုတာသိချင်ရင်ဒီဆောင်းပါးကိုသေချာဖတ်ပြီးသင့်ရဲ့သံသယအားလုံးကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
ငါတို့လုံးဝအေးဆေးတည်ငြိမ်ဖို့ငါတို့သိသင့်တဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအချက်ကနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်မယ်ဆိုရင်၊ အန်းဒရွိုက် 4.1.2သင့်အနေဖြင့်သင်၏ terminal သည်ပိတ်မည်၊ ထပ်မံမဖွင့်တော့မည်ကိုမကြောက်သင့်ပါ၊ Samsung, ဒီ update ကိုအတူပြproblemsနာများကို ရုတ်တရက်သေခြင်းတရား အရာယခုတိုင်အောင်ကြောင့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက် ဂျယ်လီစေ့ နှင့်ဆက်လက် Ice Cream Sandwich o အန်းဒရွိုက် 4.0အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာသင်သည်သင်သည်ဤရောဂါခံစားခဲ့ရသူတစ် ဦး ဟုတ်မဟုတ်ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်ကိုရှင်းပြထားပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း၏ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသောဆုံးရှုံးမှုကိုသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိသည်။ Samsung ရဲ့ Galaxy S3.
2 Samsung Galaxy S3 ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုဖြေရှင်းချက်
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ပ်သည်ပြchipနာ၏သက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုတ်မဟုတ်သိရန်လုပ်ဆောင်ရမည် ရုတ်တရက်သေခြင်းတရားက download လုပ်ပါလိမ့်မယ် Samsung USB Drivers နှင့်၏လျှောက်လွှာစတိုးကနေ အန်းဒရွိုက်, (စတိုးဆိုင်), အခမဲ့ app ကို eMMC အုတ်ခဲ.
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို execute လုပ်လိမ့်မည်။ အောက်ပါမျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် terminal တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားလျှင်၎င်းသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြလိမ့်မည်။ chip ကိုထိခိုက်.
Samsung Galaxy S3 ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုဖြေရှင်းချက်
ဖြေရှင်းချက်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးနောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့အမြန်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ပါ firmware ကိုဖြစ်စေ၊ OTA သို့မဟုတ်မှတဆင့် Kies.
အခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းနည်းများလည်းရှိသေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူများအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သည် Odin မှတစ်ဆင့်ပြုပြင်ထားသော kernel။ ဤနောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခြင်းအပြင် terminal ကိုလည်း root လုပ်ပြီး install လုပ်လိမ့်မည် ထုံးစံပြန်လည်နာလန်ထူ အရာကနေကျနော်တို့ချက်ပြုတ် roms flash နိုင်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူအများစုအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာသင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည် OTA ဒါမှမဟုတ်အားဖြင့်ကြောင်းပျက်ကွက် Kiesမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းအမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်မိလျှင်သင်သည် terminal ကို load လုပ်လိမ့်မည်။ တရားဝင်အာမခံချက်မပါဘဲကျန်တော့မည်။
ဒေါင်းလုပ် - eMMC အုတ်ခဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S3 ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
199 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
David Alonso အားပြန်ပြောပါ
၎င်းချစ်ပ်သည်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Android 4.1.2 သို့အဆင့်မြှင့်ပါကကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါ။
08/02/2013 16:57 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါ့ကိုစိတ်ချစေတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဗားရှင်းအသစ်ကိုတင်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းပြောတာနဲ့ငါစိတ်သက်သာရာရခဲ့တယ်သူငယ်ချင်း။
လုံးဝမှားယွင်းနေသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ ၄.၁.၂ ရှိပြီး၊ တစ်ပတ်အကြာ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ကြိုတင်ကြိုကြားကြိုကြားကြိုတင်မဲခဏခဏဖြစ်ပွားနေသည်။
Jose Sola ဟုသူကပြောသည်
နာရီတိုင်းမှာအတူတူပါပဲ၊ ငါနဲ့အတူဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ချိတ်နေတယ်။
jose Sola အားပြန်ပြောပါ
ဗစ်တာအဲလ်ဘာတို Santana Delgadi ဟုသူကပြောသည်
ငါကဲ့သို့သော !! မည်သူမဆို၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
Victor Alberto Santana Delgadi အားပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါအချိန်မှာမင်းရဲ့ galaxy s3 ကို telcel အစီအစဉ်မှာထည့်ပြီးကုမ္ပဏီမှ movistar သို့ပြောင်းလိုက်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား update လုပ်ဖို့ပြောခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၌အမှားရှိသည်ဟုပြောပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ရုတ်တရက်မွမ်းမံပါက၊ ထပ်မံမဖွင့်တော့ပါကကျွန်ုပ်မည်သို့ထပ်မံစတင်နိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ခဲ့တာကိုငါသိသလား၊ ငါနဲ့အတူတူပါပဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်၏ Samsung သည်မဖွင့်တော့ပါ၊ ၎င်းကိုပထမဆုံးဖွင့်ပြီးသင်အကြံပြုသည့်အဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါနှင့်အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက်, ငါနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းထား, ငါက check လုပ်ထားကြောင့်အန္တရာယ်နှင့်အတူ chip ကပြောပါတယ်နေဆဲ
terminal ကိုမည်မျှ Update လုပ်ပါစေ emmc အတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်စဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသတင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်သေခြင်းတရားကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သူ့ကိုမျှလိမ်။ မရရန် ၁၀၀ x ၁၀၀ ကိုမရ။
12/04/2013 00:29 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ပြုပြင်ထားသော kernel သို့ link ကိုထည့်နိုင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သတိထားပါ၊ ချက်ချင်းကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ် upload လုပ်သည်။
08/02/2013 17:08 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါသေပြီ ... အခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလား
အာမခံဖြင့်အကျုံးဝင်သည့် SAT သို့ယူပါ။
09/02/2013 17:34 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
julvic salcedo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ S3 နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိသည်။ အလင်းရောင်သည်အပြာရောင်နှင့်အလင်းရောင်ပြနေခြင်းနှင့်ဖန်သားပြင်လုံးဝမဖွင့်ခြင်း၊ ဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဆဲလ်ချိတ်ထားခြင်းရှိမရှိကို၎င်း၊ ငါဖွင့် လိုက်၍ ၎င်းသည်မဖွင့်ဘဲနေ၏ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုသင်ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
julvic salcedo သို့ပြန်သွားရန်
သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်း Samsung မှာ i8190l ရုတ်တရက်သေသွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘာမှမလုပ်နိူင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဖွင့်လို့မရဘူး၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jaime Rendon ဟုသူကပြောသည်
၎င်းကိုအသစ်ပြောင်းရန်ကြိုးစားနေလျှင်သေပါလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီပြproblemနာမရှိဘူးလား ??
jaime rendon အားပြန်ပြောပါ
10/02/2013 17:05 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ကောင်းသောနံနက်ခင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ S3 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသည့်နောက်ယခုတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်ပြောပြလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုနောက်ဆုံးနှင့်ဘက်ထရီ (၆၅% နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်နည်းနည်း) ဖြင့်အဆင့်မြှင့်သော်လည်း၊ ပြီးပြီလှည့်ဖြားခြင်းသုံးခု! နှင့်ဇာတ်လမ်းမှလာမပါဘဲ .... ။ ဤကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုမျှငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်း: တစ် ဦး တစ်ယောက်က ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလား။
20/02/2013 09:56 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ဒါဟာအတိအကျအတူတူဖြစ်ပျက်; ကျွန်ုပ်တွင် Jelly Bean 4.1.2 ကိုတစ်လနှင့်တစ်ပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသည်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်အထိစတင်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Jelly Bean 4.1.2 မှအသစ်အဆန်းတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲချိတ်ဆွဲထားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်သည်။
ရာအူးလ် Alberto Gamboa Flores ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ S3 (4.1.2 Jelly Bean) နှင့်လည်းအတူတူပါပဲ။ ၎င်းသည်တစ်နေ့တာအတွင်းအဆက်မပြတ်ချိတ်ဆွဲထားတတ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်သူ့ဟာသူ reboot လုပ်ပြီးအခြားအချိန်များတွင်မူပိတ်ထားသည်။ မည်သူမဆိုရှိနှင့်ပြီးသားဖြေရှင်းချက်ရှိပါသလား
Raul Alberto Gamboa Flores အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
ယခင်ဗားရှင်းနှင့်အတူအရာအားလုံးကောင်းမွန်ခဲ့သည်…ဘက်ထရီသည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိသည်…ခံစားမိသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်မပိတ်ဘဲ !! …။ ဒီ update ကိုပြproblemsနာများနှင့်ပိုပြီးပြproblemsနာများ ... နှင့်အဘယ်သူမျှမဖြေရှင်းချက်! ငါဘက်ထရီကိုနေ့ချင်းညချင်း…နံနက်ယံ၌ထားခဲ့သည့်အခါ…။ !အံ့သြစရာ! ၃၅% ပဲရှိတယ်။
!! YAAAA မှအဖြေတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်။
Samsung Galaxy S3 gtI9300 4.1.2 ။
Javier Lalin ဟုသူကပြောသည်
ငါ s3 ကို Jelly bean 4.1.2 ကို update လုပ်ကတည်းက reboot, shut up, freezes ... 4.1.1 ကပြီးပြည့်စုံတယ်ပြီးရင်ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်လိမ့်မယ်။ လူများ
ကောင်းသောညကျွန်ုပ်၌အမေရိကန်နဂါးငွေ့တန်း4ရှိပြီးငါယူနိုင်သောပိုက်ဆန်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်
မင်္ဂလာပါစိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် beta 4.1.2 ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ i9300xxelk4 ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်းမှတ်သားထားပါသည်
အကယ်၍ သင် Jelly Bean တွင်ရောက်နေလျှင်သင်အန္တရာယ်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ထို application သည် chip နှင့် model ၏နံပါတ်ကိုသာရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုသတိပေးပေးသည်ဒါကြောင့်။
မင်းရဲ့အဖြေများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဖိုရမ်ကိုသင်ကြည့်ရှုနေပြီးမွမ်းမံနေသည်ကိုကြည့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Cristian Munoz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ SGS3 ပြaနာရှိနေတယ်၊ ​​ပစ္စည်းကရိယာတွေအေးခဲနေပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးပြန်စရန်လိုတယ်။
အကောင်းဆုံးအရာက SAT သို့ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ ... လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်၏ S3 ကိုဗားရှင်း 4.1.2 သို့မွမ်းမံခဲ့သည်။ တစ်ပတ်မှယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်အေးခဲပြီးတစ်ခါတစ်ရံမိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ငါမတူညီသောဖိုရမ်များတွင်ဖတ်ရှုခဲ့ရာမှအသုံးပြုသူများစွာကြုံတွေ့ရသည်။ ရှင်းပြချက်တွေ၊ ဖြေရှင်းနည်းတွေအတွက် Samsung ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ ၄.၁.၂ ရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ သို့သော်မှတ်ချက် ၂ မူရင်း၌မူရင်းဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်ထည့်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
၄ င်းကို ၄.၁.၂ တွင် install လုပ်ပြီးပါပြီ။ အခုဆိုရင် play store ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ
Recovery ထဲကိုဝင်ပြီး wipe cache ကိုလုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် menu / settings / applications ထဲကိုဝင်ပြီး Play Store ဒါမှမဟုတ် Market ကဒေတာနဲ့ cache တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။
ငါ samsung ကို android 4.1.1 jelly bean သို့ update လုပ်လိုက်တယ်။ ငါဆက်လုပ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၄.၁.၂ ကိုထပ်ပြီး update လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ version မှာပါတဲ့အခင်းအကျင်းအသစ်ကြောင့်ဘာ asr လဲမသိဘူး။
သူငယ်ချင်းငါ odin ကနေ ၄.၂.၁ သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်မက်ဆေ့ခ်ျအက်ပလီကေးရှင်းအပါအ ၀ င်မအောင်မြင်မှုများစွာရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်း tts သည်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် 4.2.1 သို့ပြန်သွားနိုင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
edwin1209 ကို Reply
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် s3 ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး jelly bean4.1.1 နှင့်အမှတ်တံဆိပ်၏အန္တရာယ်ရှိသော chip tngo q upgrade 4.1.2 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
၏သင်တန်းကိုသင်မိတျဆှေ update လုပ်ဖို့ရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော 100% XELLA XELLC ကိုတွေ့မြင်ခဲ့စဉ်ကတည်းကမက္ကဆီကိုဂျယ်လီပဲမျိုးစုံကိုဘာတွေ update လုပ်ခဲ့သလဲ၊ ငါမွမ်းမံသည့်အခါကျွန်ုပ် sgs3 ရုတ်တရက်သေဆုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ငါ update ကိုရှိသည် 4.1.2 ငါအန္တရာယ်ရှိနေတုန်းပဲ ?????
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသာယာတယ်၊ xxella နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်သံသယတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ငါမှာဒီဗားရှင်းမရှိဘူး။ ၁ နာရီကိုငါ update လုပ်တယ်။ ၄.၁.၂ မှာရှိတယ်။ ကုမ္ပဏီဖုန်းတွေပေးသကဲ့သို့ငါကရှိသည်
နောက်တစ်ခါနှောင့်ယှက်ခြင်းအတွက် ၀ မ်းနည်းပါသည်၊ ယခုမူစတိုးဆိုင်ဖွင့်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့အကူအညီကိုငါတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
Ariadna Ramirez Rizo ဟုသူကပြောသည်
ငါလွန်ခဲ့သော ၄ လကမိုဘိုင်း samsung galaxy s4 model GT-I3 ကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကစတင်ချိတ်ဆက်ခဲ့သော်လည်းယနေ့တွင်သေသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အာမခံရှိပါသည်။ ဝယ်ယူမှုအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ငွေတောင်းခံလွှာမပါဘဲ SAT သို့ယူဆောင်သွားနိုင်မလားကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ariadna Ramírez Rizo အားပြန်ပြောပါ
စကားမစပ်၊ ဘယ် Android ဗားရှင်းကိုသင်အသုံးပြုခဲ့သလဲ။
မတ်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
Jaime ပလာဇာ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကောင်းတာကကျွန်ုပ်ဟာ update 4.2.1 ကိုရောက်နေပြီးဖုန်းကအခါအားလျော်စွာဖုန်းမြည်နေပြီးပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။
Jaime Plaza သို့ပြန်ပြောပါ
Recovery mode ထဲကိုဝင်ပြီး cache ကိုလုပ်ပါ။ အဲ့ဒီပြsolveနာကိုသင်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါဘယ်လိုပြီးပြီလဲကြည့်တော့မယ်။ သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Francisco ကိုငါနာရီဝက်တိုင်းငါ့ကိုဆွဲထားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါက recovery mode ကိုဘယ်လိုထားသလဲ
jose sola အားပြန်ကြားပါ
ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိသည်ဟုလုံးဝမှားသည်။ “ ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ” ရှိသော်လည်းသင်ရရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည် (သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်အန္တရာယ်နှင့်အတူ) ချစ်ပ်၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ S3 သည် (ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲဖြင့်) ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း၏အန္တရာယ်ရှိကြောင်းနှင့်၎င်းကိုငါရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသလောက် ၄.၁.၂ နှင့်အတူသေဆုံးခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အခြားအရာများနှင့်အတူချက်ပြုတ်ထားသော ROM များပါရှိသည်။
Logic ကမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ ၎င်းသည်အချို့ S3s (အမှားအယွင်းတစ်ခု) တွင် HARDWARE ချွတ်ယွင်းချက်ဖြစ်သည်၊ SOFTWARE ချို့ယွင်းချက်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သည် S3 ကိုမည်မျှအဆင့်မြှင့်တင်သည်ဖြစ်စေသူတို့သည် HARDWARE ချွတ်ယွင်းချက်ကိုမည်သည့်အခါမှပြန်ပြင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ (ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်) ။ အဆိုပါ SAT မှတဆင့်ဖြတ်သန်းမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ပါတယ်။
စကားမပြောခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြောပြပါ။ ဒီကနေ့မှာလူတွေဟာဘောလုံးနဲ့ဆေးပညာအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောတာတွေကိုမလုပ်တော့ဘူး၊ မဟုတ်ပါ၊ သူတို့ဟာသဲလွန်စမရှိဘဲပရိုဂရမ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊
၎င်းကိုအလွန်အမင်းဆိုးဆိုးရွားရွားမယူပါနှင့်၊ သို့သော်နောက်ခံတွင် software၊ firmware သည်ပိုမိုတိကျစွာပြောရလျှင်၊ ပြproblemနာသည် internal memory ၏ firmware ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်း firmware (အန္တရာယ်ရှိသော) ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းမှတစ်ဆင့် patch လုပ်ထားသည်။ kernel, recovery နှင့် bootloader ။
သင်၏မိုဘိုင်းသည်သင့်အား 1 + 1 =2စစ်ဆင်ရေးကိုတားဆီးပါက၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်သည်၊
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဥရုဂွေးကနေစာရေးတာ၊ သူကဒီစာကိုပေးလိုက်တယ်၊ ငါကငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုအားသွင်းနေတယ်၊
ဘက်ထရီနဲ့ဘာမှမရှိတာနဲ့ငါနဂါးငွေ့တန်း3ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့နောက်ဆုံးတော့ငါထွက်သွားလိုက်တယ်
ငါက bualaaa ကသူ့ဟာသူဖွင့် bualaaa ဖြုတ်တဲ့အခါမှာဖွင့်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမ
၄.၁.၂ Jelly Bean ရှိလျှင်သင်သိပါသလား။ နှင့်အခြားသံသယသင်ပြီးသားလျှင်ဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့နောက်သို့ ထပ်မံ၍ eMMC ကို update လုပ်ပါ
သူငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောချစ်ပ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အမေရိကန်ဖြူဆဲလ်ဖုန်း verizon 16 gb android 4.1.1 ရှိသည်။
Jose Martin ကိုပြန်ပြောပါ
16/03/2013 22:31 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
mervy အလက်ဇန်းဒါး ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းဖရန့်ကစ်ကိုကျွန်ုပ်ဖုန်းပြောစဉ်ကသေသွားပြီ၊ မဖွင့်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ သူ့ကိုအလုပ်ရုံတစ်ခုသို့ခေါ်သွားပြီးဖုန်းကို donload mode နဲ့ဖတ်ပြီး၎င်းသည်ဖုန်းကိုအပူပေးပြီးပိတ်ခြင်းအတွက်ပေါင်းစပ်ထားသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အာမခံချက်မရှိတော့ဘဲ ၄.၁.၁ တွင်ရှိသည်
mervy alejandro အားပြန်ပြောပါ
ငါလုပ်နိုင်တာတစ်ခုက SAT ကိုတောင်းခံတာဒါမှမဟုတ် Samsung ကိုတောင်းတာလား
ငါ့မှာ s3 ရှိတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ application ကိုကြည့်ပြီးစစ်ဆေးမယ်၊ ချစ်ပ်အန္တရာယ်ရှိနေရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါကြောက်တယ်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အရိုးဂျယ်လီစေ့ bexxella ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းရှိပါကကျွန်ုပ်ရုတ်တရက်သေခြင်းတရားခံစားရမည်။
Carlos Ruben Pagan Rodriguez ကိုပြန်လည်ပြောပြပါ
Mauritius supertec ဟုသူကပြောသည်
S3 မှ 4.1.2 ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ၊ မေလဇွန်တွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သင်က Samsung ကိုတောင်းဆိုပြီးပန်းကန်ကိုလဲအောင်လုပ်ရမည်
mauricio supertec အားပြန်ပြောပါ
သူတို့ကကျွန်တော့်ဆီကို Samsung Galaxy S3 ခေါ်လာပြီး ၂ မိနစ်ကျော်ကြာမှပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကမှပါ။ ဒါကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖုန်းမှာပုံမှန်ပါပဲ
သင့်တွင်ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ခြေရှိသည့် terminal နှင့်သင့်ကုန်သည်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ s ပတ်ပတ်လည် ၅ ပတ်ရှိပါပြီ၊ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါပြီ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်မိုက်ခရိုချစ်ပ်ကိုပြောင်းပြီးအခြားတစ်လုံးနှင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။
၎င်းသည် internal memory သို့မဟုတ် emmc ၏ပြaနာဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို SAT သို့ယူဆောင်သွားရမည်။ 05/04/2013 00:38 pm တွင်« Disqus »ကရေးသားခဲ့သည်။
သတင်းအချက်အလက်ကလုံးဝမှားယွင်းနေသည်။ ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းအတွက်အဖြေမရှိပါ။ Odin ပရိုဂရမ်သည် Jelly Bean သို့အဆင့်မြှင့်တင်လျှင်ပင်၎င်းစက်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသေဆုံးနိုင်သည်။
Samsung marce အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
Rodrigo Mejia ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီဖုန်းကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ရုတ်တရက်သေရမယ့်ပြproblemနာကဆိပ်ကမ်းအသစ်တွေမှာဖြစ်မယ်။ ငါဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာပေးမှာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် = D
အကောင်းဆုံးကတော့ Emmc ကိုသူတို့တပ်ဆင်ခွင့်ပြုတာပါပဲ
ပြဇာတ်စတိုးမှ Checker နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစစ်ဆေးပါ
07/04/2013 02:31 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ကောင်းပြီ။ Emmc စစ်ဆေးသူကို download လုပ်သောအခါ terminal သည်အလွန်ကောင်းသောအခြေအနေရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Apple က emmc memory ကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းသည်ထိခိုက်နစ်နာသော series မှဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးသည်။ 07/04/2013 02:55 တွင် "Disqus" ကရေးသားခဲ့သည် -
Jorge Sandoval ဟုသူကပြောသည်
တောင်းပန်ပါတယ်ဒီဆဲလ်ဖုန်းကိုသက်ရောက်သောစီးရီးဆိုတာဘာလဲ။ ငါဝယ်ယူစဉ်းစားမိ TMB
Jorge sandoval သို့ပြန်သွားပါ
လေးစားပါတယ် !! အဆိုပါ s3 9305 16gb အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗားရှင်းအတူတူပင်ဘေးဥပဒ်ကိုခံစားနေရပြီး ??
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Galaxy s3 မှာပြသနာရှိနေတယ်၊ ​​သင်ပြောတာကအေးခဲနေပြီး၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ရန် (သို့) ပြန်လည်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကစပြီးငါ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်။ ဒါကမဖြစ်သေးဘူး။ ငါပြောခဲ့တဲ့ program ကိုငါ install လုပ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့အဲဒါကမှားနေပုံရတယ်။ ငါ့မေးခွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကဖန်သားပြင်ကျိုးသွားပြီးအဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ယူလိုက်တယ်။ မျက်နှာပြင်ဟာ့ဒ်ဝဲလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြောင်းလိုက်တာတောင်မှဒီချစ်ပ်ဟာမပြောင်းလဲသေးတဲ့အပိုင်းအစတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လား ?? ငါဆိုသည်ကား၊ သွားရာအရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှါသွားသလော။
ဒံ Marquez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါ SGS3 အိုင်တီအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်အိုင်တီ OFF နှင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိနောက်ထပ်လည်ပတ် SGS4.1.1 ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဗားရှင်း ၄.၁.၁ ကိုကျွန်ုပ်မွမ်းမံနိုင်ပါ။ အဖြေအချို့သို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ အာမခံချက်မရှိပါ။
DANIEL MARQUEZ သို့ပြန်ပြောပါ
အကယ်၍ သင်သည် download mode သို့သွားပါကOdínဖြင့်စမ်းကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းကိုနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုသို့ယူဆောင်ရပါလိမ့်မည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 11ပြီလ ၂၆ ရက်ညနေ ၅း၃၆ တွင်၊
Emmanuel Couste ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ android version 4.1.2 ရှိတယ်
အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်း I9300 EMC အကြောင်းကိုတစ်ခုခုကပြောပါတယ်
လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါ
Emanuel Couste အားပြန်ပြောပါ
10-04-2013 မှာ Samsung Galaxy S3 ကိုဖုန်းအိမ်မှာ ၀ ယ်ပြီး 12-04-2013 SUDDEN DEATH မှာဖုန်းဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာခန့်မှန်းခဲ့တယ်။ ငါပြောတာကိုမင်းယုံဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဖုန်းငွေတောင်းခံလွှာနဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချပေးလိမ့်မယ်။
1-I ဖုန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လိုက်ပြီးညာဘက်ခြမ်းတွင် icon တစ်ခုပေါ်လာသည်
၂။ ကျွန်ုပ်သည် Moviestar ကဒ်၏အချက်ပြမှုပျောက်ဆုံးသွားသည်တစ်နေ့လုံးအခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်သည်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်။ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာကိုအလျားလိုက်မှဒေါင်လိုက်သို့ ၄ စက္ကန့်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လုံးဝတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသောအရာများပြောင်းလဲရန်များစွာလိုအပ်သည်။
LOUNCHER 3D trial version လို့ခေါ်တဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို install လုပ်ပါ။ နေ့တစ်ဝက်လုံးလုံးအဆင်ပြေအောင်ငါ Louncher ရဲ့ချိန်ညှိချက်များနှင့်ကစားခြင်းသို့ပြန်သွားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပါးလွှာပြီး firmware အမှားသတင်းစကားသည်ထိုအရာနှင့်တူပုံရသည်။ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ငါဖုန်းကိုပြောင်းလိုက်ရင်ပိုကောင်းတာထက်ကောင်းမှာပဲ
မိုင်းလည်းထိတ်လန့်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ၁.၄.၄.၄ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်
Camilo Castro ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာညနေခင်းပါ; ငါ့နာမည် camilo castro, ငါ samsung galaxy s3ကိုရတယ်။ ပိတ်ထားတယ်၊ မဖွင့်ချင်ဘူး၊ မျက်နှာပြင်မှာဘက်ထရီပေါ်လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့အားသွင်းမယူဘူး၊ Samsung ဆဲလ်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင် Samsung ကိုကူညီချင်တယ်။ super mi cel သည် 3114428671 (သို့) 7451222 ext 151 မတိုင်မီလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်၍ စတင်လုပ်ဆောင်သည်
camilo castro အားပြန်ပြောပါ
အော်စကာ Arriaga ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းမှာငါ Galaxy တစ်ခု၏စျေးနှုန်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဝယ်ချင်တယ်။ ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူအခြားသုံးစွဲသူများဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ၆ လမှာငါ ၀ ယ်ပြီးငါ့ရဲ့ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသွားမှာကိုငါ Amazon အတွက်ကြိုတင်မှာယူမည်။ စက်တင်ဘာလမှာငါအဲဒီရက်မှာအမေရိကန်ကိုသွားမယ်။ အဲဒါကို ၀ ယ်ဖို့လုံခြုံတယ်လို့သင်ထင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီပြသနာကအလားတူပဲပြသမလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Oscar Arriaga အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ အခုရောင်းနေတဲ့သူတွေ၊ ဥပမာ Movistar ကိုရောင်းတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးကနေရောင်းတဲ့သူတွေက emmc ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကနေလွတ်မြောက်ပြီ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 26ပြီလ ၂၆ ရက်ညနေ ၅း၃၆ တွင်၊
ကျွန်ုပ်၏ galaxy s III ကိုဗားရှင်း 4,1,2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးကြောင်းသင်သိပါသလား။ application (MMc brigbuk) တွင်ကျွန်ုပ်သည်အန္တရာယ်ရှိသောချစ်ပ်များရရှိပါသလား။ နှင့်ငါ့ကိုကပ်သောအခြားအရာပိတ်ထား ???? လေးစားပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ နို ၀ င်ဘာလတွင်မိုဘိုင်းကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မှာ android 4.1.2 ရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားသော့ခတ်ထားသည့်မျက်နှာပြင်နှင့်စပြီးပြgiveနာများစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်ကြာအလုပ်မလုပ်စေရန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ တန်ဆဲလ်ဖုန်းဝယ်ယူခြင်းသည်မည်သူမဆိုလိမ်လည်မှုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်၏ galaxy s3 သည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည် iPhone 4s (သို့) ၅ ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်နှင့်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်းများရှိလိုသည်။ သင်ငြီးငွေ့သည်အထိကြာလိမ့်မည်။
alonso lopez အားပြန်ပြောပါ
မနေ့ကငါ့ရဲ့ s3 ကိုလူတွေပဲသေဆုံးသွားကြပြီ။ ပရိုဂရမ်လေးတင်လိုက်တယ်။ ငါ့ချစ်ပ်ဟာအန္တရာယ်ရှိနေပြီ၊ ဒီနေ့မှာပဲကွယ်သွားပြီလို့ပြောတယ်။ သူက Samsung ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာထပ်ခါထပ်ခါပဲ🙁ငါ odin ရဲ့ update ကိုလုပ်ပြီးပြီ။ တစ်ခုခု ??? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းသောည, တစ်ချိန်ကသေခြင်းနှင့်အတူ, နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကဖြေရှင်းနိုင်မလား? g- ထိပုတ်ပါသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကဘာလဲ ???
oscar jara အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ S3 သည်ကျွန်ုပ်အတွက် Kies update ကိုဖေဖော်ဝါရီလအထိကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းမှသတိပေးချက်ရပြီးသတိပေးသည့် LED မီးပင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ရွေ့လျားနေမည်ဖြစ်သော်လည်းမျက်နှာပြင်ပိတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ခဏအကြာမှာရုတ်တရက်ဖွင့်လာတယ်။ အဲဒီပရိုဂရမ်ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးပြီ၊ အန္တရာယ်နှင့်အတူ chip ကို»
ကျနော့်မေးခွန်းက SAT ကိုယူမယ်ဆိုရင်သူတို့ကငါ့မိုဘိုင်းကိုနောက်တစ်ခုပြောင်းမှာလား။ အန္တရာယ်မရှိသောအခြားအရာအတွက်ထိုချစ်ပ်ကိုသင်ပြောင်းလဲပစ်ပါသလား။ သူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။ ငါ့ကုမ္ပဏီ movistar, သင်ခဏနေနိုင်မလား ??
Terminal မအောင်မြင်ပါက SAT သို့သင်မပို့နိုင်ပါ၊ သင်လုပ်သည့်အခါသူတို့သည်သင့်အတွက်၎င်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အခြားတစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်ပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ ၁၃ ရက်ည ၈း၅၈ တွင်၊
ငါ s3 G TI 9300 ရှိတာမေ့သွားတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ပထမဆုံးမေးခွန်းမမေးသေးပါ။ မနေ့ကမှစပြီးကျွန်ုပ်၏ play store နှင့်ပြသနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် application ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်ချက်ချင်းပိတ်သွားသည်။ ခဏကြာသော် windows ၂ ခုနှင့် screen တစ်ခု googleplay ဟုဆိုသည်။ စတိုးဆိုင်ကရပ်တန့်သွားပြီးကျန် com.google.apps က q ကိုလက်ခံသည်၊ သတင်းပို့သည်သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုတစ်ခါတစ်ရံအေးခဲစေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ ငါဟာ Samsung S2 GT-I3 ကိုငါပိုင်ဆိုင်နေပြီဆိုတာပဲ
ကျွန်ုပ်၏ပြသနာသည်အလွန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်၊ ရေစက်အချို့သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်သို့ကျသွားသော်လည်း Enter ခလုတ်သည်စိုစွတ်သွားသည်။ ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီး application အားလုံးကိုအပြည့်အဝဖွင့်သည်။ သို့သော်မျက်နှာပြင်မှာလုံးဝပိတ်ထားပြီး၎င်းသည်ရေအနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။
ငါလုပ်နိုင်တစ်ခုခုရှိပါသလား ??? သင့်ရဲ့အချိန်နှင့်ထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Samsung S3 သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကွယ်လွန်သွားသည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူက software ကို update လုပ်တဲ့ပုံပေါ်လာတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအလုပ်မလုပ်သေးတဲ့ application တစ်ခုကို uninstall လုပ်ချင်တယ်။ Samsung ၏နိမိတ်လက္ခဏာမပေါ်မှီတိုင်အောင်၎င်းကိုဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ငါနဲ့အတူတူပါပဲ၊ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီကိစ္စမှာဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှမသိဘူးလား။
Elith Cruz ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ပြproblemနာမှာအုတ် (brick = brick) ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုဤနည်းဖြင့်ရှာဖွေပါ။ အကယ်၍ ပျော့ပျောင်းသောအုတ်ဖြစ်လျှင်သင်ကသင်ကိုယ်တိုင် ODIN နှင့်ပြင်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကမက္ကဆီကိုတွင်နေထိုင်ပါကခိုင်မာသောအုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါကအထူးကိရိယာတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ စီးတီး, facebook အသုံးပြုသူကိုဆက်သွယ်« jtag mexico »
Eliuth Cruz အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်မှာ Galaxi S III 4.1.2 ရှိပြီး Jelly bean ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်အနက်ရောင်အားလုံးနှင့်နောက်ပြန်မီးများ (နောက်ကျော) ကိုပိတ်ဆို့ထားပြီး options တွေဖွင့်ထားပြီးဘာမှမလုပ်ပဲ ၉၇% ဘက်ထရီနဲ့ပါ။ အကြောင်းကို 97 ရက်အကြာဝယ်ပါပြီ။
အဲဒါကိုနည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနဆီကိုယူပြီးအာမခံချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
13/05/2013 00:44 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တွင်တရုတ် s3 ရှိသည့်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖွင့်သော်လည်းဖန်သားပြင်မှာကွက်လပ်မရှိသော်လည်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရောက်လာပြီး Mr. Francisco Ruiz ဖြစ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်းတုံ့ပြန်ပါ
FRANCISCO GOR MORNING MY MY SGPLPLICATION No. Safe Chip ။ , Version 1.4.4 ။ မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ် samgsun ၌ရုတ်တရက်သေခြင်းတရားရှိပါသလား
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Samsung Galaxy S3 ဟာပိတ်ထားပြီးထပ်မဖွင့်ဘူး။ အဲဒါကိုသူတို့က Samsung SMS စင်တာကိုပို့ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ movistar စတိုးကိုခေါ်သွားတယ်။ ရက် ၃၀ ကြာပြီးနောက်မှာပြန်ပို့လိုက်တယ်။ အားသွင်းနိုင်သည့် connector မှစိုထိုင်းဆမကျေနပ်မှုကိုငါမတူညီတဲ့ပညာရှင်သုံး ဦး ထံခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူတို့အားလုံးသည်တူညီသောသဘောတူခဲ့ကြသည်။ အတွင်းပိုင်းအပူလွန်ကဲမှုကြောင့် terminal တွင်မီးစွဲသည့်ပရိုဆက်ဆာရှိသည်။ အာမခံကရေပျက်စီးမှုကိုမဖုံးဘူး၊ ငါစားသုံးသူရဲ့ရုံးခန်းထဲကို ၀ င်ခွင့်တောင်းပြီးသုံးလလောက်အကြာမှာ Sansung ကထပ်တူထပ်မံပြောဆိုခြင်းကိုဖြေကြားခဲ့တယ်။ ငါရရှိသောအစီရင်ခံစာနှင့်ပူးတွဲပါလာသောအခါကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်သွားသည်။ ပျက်စီးခြင်းနေရာကိုညွှန်ပြသည့်ဖုန်း၊ ဓာတ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်၏ terminal နှင့်လုံးဝမကိုက်ညီကြောင်းသတိပြုပါ။
တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Samsung တော့မဟုတ်ပါဘူး။
17/05/2013 16:30 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Martha Lujan Lione ဟုသူကပြောသည်
Hello, ကျေးဇူးပြု။ ကူညီမစ !!!! ငါ့သားကိုမသိသူအပေါ်မှာငါ့ဂလက်ဆီ cell phones နဲ့ငါ CAN မခေါ် OR ဖတ်ရန် MSS ကစား ... သူ USER နှင့်စကားဝှက်အတွက်မေးနဲ့ကျွန်မ DO IT OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo မအောက်မေ့ !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
Marta Lujan Lione အားစာပြန်ပါ
သူ Carl ဟုသူကပြောသည်
ဟေ့သူငယ်ချင်း၊ နေ့ကောင်း၊ ဒီရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းဟာကျွန်တော့် s3 အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲ။ တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်လောက်သုံးနေပြီ။ ပြproblemနာကဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ငါဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်၊ .. အာမခံချက်ကိုအတည်ပြုရန်နည်းလမ်းရှိပါသည်။ ငါ Movistar နှင့်အတူရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ s3 ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်«အသစ်»သို့သော်ကင်မရာ၏ LED သည်ပြင်းထန်မှုမရှိကြောင်း၊ မှောင်မိုက်သောအခန်းတစ်ခန်းတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါသင်မည်သည့်အရာမျှမမြင်တွေ့ရဘဲကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည်မဖြစ်သင့်ပါ။ ငါ့ဖုန်းပိတ်ပြီးပြန်မဖွင့်တော့သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကြောင့်ဘက်ထရီသည်ဒီထက်ပိုပြီး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျလိမ့်မည် (သို့) ကျွန်ုပ်သည်အပိုထပ်ဆောင်းထားရမည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေတယ်) သူတို့ကသူကဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဟုတ်သလား။
Solokarla ♡ ဟုသူကပြောသည်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဝယ်ယူထားသော galaxy s3 mini အသစ်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်သူသည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အပ်ဒိတ်တစ်ခုရှိပြီးစတင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် ၅၀% ခန့်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပြိုလဲသွားပြီးဘက်ထရီကုန်သွားပြီးဆဲလ်ဖုန်းပိတ်သွားသည်။ ဘက်ထရီကိုပြန်ထည့်ပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားပါ၊ သို့သော်ယခု၎င်းသည်မိတ်ကပ်နှင့်မော်ဒယ်များပြသထားသည့်မူလမြင်ကွင်းကိုကျော်သွားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
Solokarla to အားပြန်ပြောပါ
Luis pksz ဟုသူကပြောသည်
သင်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူခဲ့သည်ကိုအာမခံရန်၎င်းကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးဟုပြောရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဝိုင်ဖိုင်မှ update လုပ်နေကြောင်းနှင့်အင်တာနက်သည်ခဏတာပျောက်ကွယ်သွားပြီးထိုမှထိုသို့ဖွင့ ်၍ မရပါ
luis pksz သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ မေးမြန်းချက် Mr. Francisco ကျွန်ုပ်တွင် s3 နှစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းဟုပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်ပိတ်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်ကို Emai သို့အပ်ထားပါသည်။ အဖြေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Gustavo Arauz, G ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဗားရှင်း ၄.၁.၂ နှင့် i4.1.2ubell9300 ရှိသည့်ကျွန်ုပ်၏ s1 သည်ဤဗားရှင်းနှင့်ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ခြေရှိနေသေးသလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Gustavo Arauz, G မှပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်တွင် s3 ရှိပါပြီ။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုရွှေ့ပြီးပြီဆိုတာကျွန်ုပ်သိပြီးကျွန်ုပ်သည်ပျက်ကွက်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဗားရှင်း ၄.၁.၂၊ ကျွန်ုပ်သည်အာမခံအောက်တွင်ယူထားသည်၊ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖမ်းမိတယ်စက်ရုံမှအရာအားလုံးကိုပြန်ထားရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်ပထမဆုံးနေ့ရက်များသည်ကောင်းစွာလည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်သည်မဖမ်းဆီးနိုင်သေးပါ၊ သို့သော်မနေ့က၊ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်အထူးသဖြင့် chrome ကိုသုံးသောအခါ .. အဲဒါကူညီပေးတယ်
ရာဖေးလ် Parra Sandoval ဟုသူကပြောသည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၌ S3 တစ်ခုရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျွန်ုပ်ဖြုတ်ချလိုက်သည်၊ မျက်နှာပြင်ပြတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည် Movistar နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့ယူသွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲခန့်အကြာကသီတင်းနှစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်အားကယ်တင်ခဲ့သည်။ ငါပြခန်းထဲမှာငါ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုရန်သွားတိုင်း, သူကပြန်လည်စတင် ..
ငါနေ့စဉ်ကစားသော "sims free" ဂိမ်းကိုမနေ့က download လုပ်ထားတယ်။ မနေ့က level up unlock (snow snow)၊ ငါ game ကို restart လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဂိမ်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းကပဲအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကြောင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဂိမ်း crash စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဤပြtheနာသည်အဓိကပြproblemနာနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဘာစိုးရိမ်နေသနည်း၊ ဖုန်းကိုဖွင့ ်၍ မရပါ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ။
မနေ့ကငါချီလီစတိုးဆိုင်များနှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအရာများစွာမှ application များစွာကိုကူးယူခဲ့သည်။
ယနေ့နံနက်ယံ၌ငါနိုးလာသောအခါ၎င်းသည်အားကုန်သွားသည်ကိုသတိပြုမိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုအားသွင်းရန်အချိန်ပေးသည်။ နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည်။ ထိုတွင်ဒရာမာစတင်ခဲ့သည် !!
ငါပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါသောအခါ၊ အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်သည် samsung s3 လိုဂိုနှင့်အတူပေါ်လာသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည် movistar မျက်နှာပြင်သို့သွားပြီး၊ အနက်ရောင် samsung ဖန်သားပြင်သို့ပြန်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်သူတို့လိုချင်သမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်နိုင်သည်။
ငါဘက်ထရီ, chip နှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည် ... ငါပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလားကြည့်ရှုရန် 10 မိနစ်, ဒါပေမယ့် NO!
ငါ pc သို့ဆက်သွယ်သော်လည်းကောင်းကောင်းမဖွင့်သောကြောင့်ပြန်လည်စတင်မှသာ၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်၎င်းကိုအိမ်လုပ်နှင့်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိပါကကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဤဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Rafael Parra Sandoval အားပြန်ပြောပါ
ငါ့ရဲ့ s3 ကငါ့ကိုချစ်တယ်။
android ဖုန်း 4.1.2
baseband ဗားရှင်း: I93000XEMC2
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ငါမှာ Galaxy SIII ရှိတယ်၊ ငါပြproblemနာကမိနစ် ၂၀ တိုင်းမှာချိတ်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ငါကအဲဒီ chip ကိုအန္တရာယ်ရှိနေတယ်၊ ​​သေနေတာလား ??? ငါဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ပြီးနောက်တဖန်ငါ့ကိုမဖွင့်နိုင်အောင်ငါ့နှုတ်၌ငါ့နှလုံးနှင့်အတူတဖန်ထားရမည်။
ကျွန်ုပ်တွင် s3 ရှိပြီး androi 4.1.2 ဖြင့်၎င်း application ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော chip ကို told ကျွန်ုပ်အားမပြောကြားခဲ့ပါ
လွန်ခဲ့သော ၁ ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းကိုတောင်မပိတ် နိုင်၍ ဘက်ထရီကိုလည်းဖယ်ထုတ်ရသည်။ ပြန်ဖွင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်သုံးကြိမ်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးသုံးကြိမ်မြောက်၊ ကျွန်ုပ်၏လျှောက်လွှာများ၊ ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်အားလုံးမှာ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်စက်ရုံမှအရာအားလုံးကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ပညာရှင်အတော်များများပြောသည့်အတိုင်း ၂ ရက်အကြာတွင်၎င်းသည်သူ့ဟာသူပိတ်သွားသည်။ SAMSUNG S1 MY MODEL IS SGH ဆိုသည့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုဖွင့်သောအခါတင်ဆက်မှုတစ်ခုသာပေါ်လာလိမ့်မည် - T3
ပြီးတော့မိုက်ကရိုဆော့ကနေကျွန်တော်ဟာဖြေရှင်းချက်တခုခုရှိရင်ကြည့်ရှုချင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအာမခံကသီးခြားဖြစ်လို့ငါဒီအချက်ကိုယုံကြည်မှုကနေဘာကိုဆိုလိုတာလဲငါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာဒီကိစ္စကိုသတိပြုမိတယ်၊ , ငါမျှော်လင့်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်!
ငါဖုန်းတွေအရမ်းဆိုးနေတဲ့ Samsung Samsung Brand ကိုငါမကြိုက်ဘူး
Hello Francisco, ငါ3တွင် s4.1.2 ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅ ရက်က၎င်းသည်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း၊ အဖြေတစ်ခုရှိခြင်းသို့မဟုတ်သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၌အာမခံချက်မရှိဘဲရှိသည်။
ကျွန်ုပ်ဖုန်းပျက်နေခြင်းနှင့်မည်သို့စတင်ခဲ့သနည်း၊ ၎င်းသည်ပိတ်ပြီးကျွန်ုပ်ထပ်မံဖွင့်ရန်ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ eMMC ကိုလျှော့ချပြီးဗားရှင်း v1.4.4 တွင်ဖော်ပြထားသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်စစ်ဆေးသောအခါ၎င်းသည်ဗားရှင်း ၄.၁.၂ အဖြစ်ပုံပေါ်သည်။ အန္တရာယ်ရှိလား ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းနှစ်ခုပေါ်လာကတည်းက ...
Jose Perez သို့ပြန်သွားပါ
မေီ Isabel ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! အင်တာနက်ပေါ်တွင်အရာရာများစွာကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် Galaxy S3 ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်ဖုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမတွေ့ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုငါဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဟာကြာရှည်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလာတယ်။ နောက်ထပ်သတိပြုမိသောအမှားတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်ရန်နှင့်၎င်းကိုလက်ခံရန်မကြာခဏကျွန်ုပ်အားမကြာခဏမေးလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းမှာ FIRMWARE ERROR အမှတ်အသားဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုကျွန်တော်ဂရုမစိုက်သော KIESs နှင့်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးတစ်ခုခု
3 ရက်အကြာငါအိတ်၌ရှိ၏နှင့်လဲကျသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ဘာမှမပါဘဲ, ဒါကြောင့်ပဲပယ်သွား၏။ ကျွန်ုပ်၏မူကွဲသည်ထိုနေ့ရက်များတွင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းရှိမရှိနှင့်၎င်းသည်ချွတ်ယွင်းပါကယခုမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ့ကိုဖွင့်လို့မရဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ app တစ်ခု install လုပ်လို့မရဘူး၊ ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ chip information ကိုရှာဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုလား။ ဒါမှမဟုတ်လား။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ထိုသတင်းအချက်အလက်ကို SAMSUNG ၏ဗဟိုသို့ပေးပို့လိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်အားမှားကြောင်းပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Amy Isabel အားပြန်ကြားပါ
ကားလ် Carlson ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ sgs3 ကိုအရှိန်မြှင့်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၌အာမခံချက်မရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာယုတ္တိကဒ်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် imei နှင့်အလားတူတစ်ခုခုကိုထိခိုက်လိမ့်မည် ???? သို့မဟုတ်ပါကပုံမှန်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် ????
Carl Carlson အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Samsung S3 GT-I9300 တွင်စပိန်ဘာသာစကားမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူအားဘာသာစကားပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ပညာရှင်တစ်ယောက်ထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူမပြောနိုင်သည်မှာစနစ်သည်သူကိုမစွန့်ခွာပါကအမှားတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံး၌သူသည်သူနှင့်မတူသော update ကိုကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်တွင် android 4.2.2 ရှိပြီး၎င်းကို၎င်းအားမီးမွှေးပေးသည်။ ဤကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ????
ဟဲလို! ... .. ငါရက်အနည်းငယ်လောက်ငါ့ကစားစတိုးဆိုင်နှင့်အတူပြproblemsနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် PLAY STORE application ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်ချက်ချင်းပင်ပိတ်သွားသည်။ ခဏကြာသော်ငါဖန်သားပြင်ပေါ်မှပြတင်းပေါက် ၂ ခုရလာသည်၊ တစ်ခုမှာ googleplay စတိုးရပ်တန့်သွားသည်၊
ကျွန်ုပ်ဖုန်းကို ROM 4.2.2] Slim Bean-d2 ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး install လုပ်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာ wipes များ၊ "Wipe data factory reset"၊ "Wipe cache partition", "Wipe dalvik cache" နှင့်ထို့နောက် sd မှအသစ်ထပ်မံတပ်ဆင်သည်။ ရွမ်
ငါ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါပြီ, ဒရာမာမပါဘဲအဆုံးသတ်, cwm menu ကိုပြန်လည်ငါပြန်လည်စတင်ပေမယ့်သူကဖုန်းကိုနောက်တဖန်မစတင်ခဲ့
ဒါဟာငါ့ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode မှာဖွင့်မပေးပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးဘာမျှမ, ဒီတပ်ဆင်၏တစ်နာရီဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘက်ထရီကပြည့်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး။
ဟယ်လိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ Galaxy SIII ရှိတယ်၊ တတိယအကြိမ် samgsung လိုဂိုနှင့်အတူအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်ရုတ်တရက်လှည့်သွားပြီးအဲ့ဒီကနေရွေ့မသွားဘူး၊ အပြာရောင်မီးနဲ့အတူငါမဖြစ်မီ၊ ၎င်းကိုဗဟိုဆီသို့ခေါ်သွားတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံကိုသူတို့သူတို့ပြန်လည်စတင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုနှင့် application တစ်ခုကိုကူးယူကူးယူနိုင်ပြီဟုပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ထူးဆန်းနေပုံရသည်မှာကျွန်ုပ်တတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ် download လုပ်သမျှသည်စတိုးဆိုင်မှဖြစ်သည်။ ငါလုပ်တယ် ??? နောက်တစ်ခါထပ်မဖြစ်ဖို့ငါဘာလုပ်လို့ရမလဲ ???
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ ၂ နှစ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော s2 ရှိတယ်၊ သူကပြောတယ်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ chip နဲ့အခြားအရာအားလုံးအရမ်းကောင်းနေတယ်၊ ​​သူတို့ကမြို့ပြဒဏ္areာရီတွေပါ။ လေးစားပါတယ်
ဟယ်လို။ ကျွန်တော့် s3 ကို ၇ လကြာအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပဉ္စမလကစပြီးအေးခဲလာတယ်။ နာရီဝက်တိုင်းသူလုပ်သောကြောင့်ယခုမခံနိုင်တော့ပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ ငါ၌ ၄.၁.၂ ရှိပြီး၎င်းသည်ထပ်တူဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်း ပို၍ ပင်ဆိုးသည်။ ဤသို့မဖြစ်ခဲ့လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
သင့်အတွက်သင့်တော်ကောင်းမွန်မှုရှိမရှိသိရန်ချက်ပြုတ်ထားသော rom အချို့ကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်စမ်းကြည့်ပါ။
goge nm ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Samsung ၏ galaxy s3 odin movile pro တွင်တရားဝင် rom နှင့်ထည့်ပြီးပါပြီ
Samsung နှင့်ယခု odin သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြန်လည်စတင်ခြင်းမရပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်မသိပါ
မိုဘိုင်းကိုဖွင့်ပါ။ miu ကို install မလုပ်မီ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ dowlan ဖြင့်ဖွင့်ပါသော်လည်းကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်း usb ကျိုးသွားပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို micro sim card ဖြင့်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါ။
goge nm အားပြန်ကြားပါ
ပြီးခဲ့သည့်ညကရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ samsung galaxy s3 သည်အလုပ်ကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ ၎င်းတွင်ဘက်ထရီ ၃၀% ကျန်တော့သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်ပိတ်ထားသည်၊ ဖြေရှင်းနည်းလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကျွန်တော့် Samsung s3 ကွယ်လွန်သွားပြီ။ လွန်ခဲ့သောတစ်လက ၀ ယ်ပြီးအသုံးပြုခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀ နှစ်သာရှိသေးသည်။ ယနေ့မနက်တွင်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ထံမှနောက်ဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းခံရပြီးမွန်းလွဲပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်မနေပါ။ ဘိုလီးဗီးယားမှ ပို၍ ကြာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အရေးတကြီးဖြေရှင်းချက်ရလိုသည်။ = /
ပါပလော Suils (CIT) ကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်သည် !!
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မျက်မှန်များစွန့်ခွာလာသောဂူစတာဗို Torres Zamorano နှင့်ငါ့မျက်နှာရှာကြည့်ပါ
Alighieri Ramirez De Pester ဟုသူကပြောသည်
Alighieri Ramírez De Pester အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ3days ago ကျွန်ုပ်၏ samsung သေဆုံးပြီးနောက်ဆုံးထွက် version သည်အပြာရောင်၊ ကျွန်ုပ် samsung ထပ်မံမဝယ်တော့ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာတရုတ်ဆဲလ်ဖုန်းရှိတယ်၊ ပြီးတော့သူကပိတ်လိုက်၊ ဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဒါကသူ့ကိုဖြစ်ပျက်လို့ငါဘာမှမရနိုင်ဘူး
ကျွန်ုပ်၏ Samsung S3 ပြန်လည်စတင်ပြီး "emmc" ကို download လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ chip သည်အန္တရာယ်မရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ???
လာ Miiluh Ldz ဟုသူကပြောသည်
download software ကိုကျွန်ုပ်သွင်းလိုက်သည်။ sansung နိမိတ်လက္ခဏာကိုမပိတ်မှီတိုင်အောင်၎င်းကိုဖွင့်ပြီးပိတ်ထားသည့်ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ထပ်မံအသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဆင့်တွေကိုပြောပြပါ
Lah Miiluh Ldz သို့ပြန်သွားပါ
အကယ်၍ သင်သည် download mode သို့ဝင်နိုင်ပါကမူလ Samsung firmware ကို Odin မှတဆင့် flash လုပ်၍ download လုပ်နိုင်သည်
29/11/2013 16:02 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါဘယ်မှာကူးယူရမလဲ။ ဖုန်းပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆဲလ်ဖုန်းကိုဘာကြောင့်၎င်းအတွက် သုံး၍ မရနိုင်ပါ၊ ထိုပရိုဂရမ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
29/11/2013 16:11 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
အကယ်၍ သင်ရှုံးနိမ့်လျှင်၊ ပြန်လည်ရယူရန် odin မှပြန်လည်ခွဲခြားခြင်းကိုအမှတ်အသားပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ sansung galaxy s3 mini ကိုပြုပြင်လိုပါကကျွန်ုပ်ဖုန်းပေါ်ရှိအရာအားလုံးဆုံးရှုံးမည်လော။ သူတို့ကိုငါဘယ်လိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
ကျွန်ုပ်တွင် samsung galaxy s3 ရှိသည်။ ၎င်းကို၎င်းကိုဖွင့်သောအခါတုန်ခါပြီးအနိမ့်ခလုတ်များဖွင့်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပုံရိပ်မပေးပါ၊ ခေါ်ဆိုမှုများဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့်အရာအားလုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပုံရိပ်မပေးပါ၊ ပေါ်မှာငါ့ကိုပုံရိပ်မပေးပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ငါဘာလုပ်နိုင်တယ် ???
သတ္တုတွင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ငါပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပေးပို့လိုက်သည်နှင့်သူတို့ကသူတို့ကဒါဟာမျက်နှာပြင်ကြောင်းပြောပေမယ့်ငါကနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို update တဲ့အခါမှာသူကပျက်ကွက်စတင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမထင်ကြဘူး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ galaxy s3 ကကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါက၎င်းကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းကိုမဖွင့်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အများကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးသူတို့ကကျွန်ုပ်အား xfa ကိုမည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းမသိကြောင်းပြောကြသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ galaxy s3 ကဘယ်လိုနေနေလဲ၊ ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတယ်၊ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ galaxy s4 ဆီကနေဘက္ထရီတစ်ခုရလိုက်တယ်။ အဲဒါကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမကြာခင်မှာပဲဆဲလ်ကဆဲလ်နဲ့အချိန်ကြာကြာဆက်နေခဲ့တယ်။ ငါဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းကိုဖွင့်သည်။ တစ်နေ့လုံးပြproblemsနာမရှိဘဲဆက်နေခဲ့သည်။ သို့သော်မနေ့ကကတည်းကငါနဂါးငွေ့တန်းကိုသိမ်းပိုက်သောအခါ၎င်းသည်ပိတ်ပြီးယခုအထိကျွန်ုပ်မဖွင့်နိုင်သေးပါ။ ငါဘာလုပ်နိုင်လဲ၊ ဒါကဘက်ထရီလား၊ ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းလား ???
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာလည်းပြhaveနာရှိနေတယ်၊ ​​ကျွန်ုပ်ကနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ကို install လုပ်ပြီးပြီ၊ Jelly Bean 4.3 ဗားရှင်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့မျက်နှာပြင်အေးခဲသွားပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာထပ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​မကြာခဏပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်လာတယ်၊ ဒီပြproblemနာကိုမွမ်းမံမီ
Cristopher Galo သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်မှာအလွန်လေးနက်သောပြhaveနာတစ်ခုရှိသည် galaxy s3 ရှိပါသေးတယ်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကျန်ရှိသောနောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုရသေးပါ။ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြtheနာတစ်ခုမှာယခု၎င်းကိုထည့်သွင်းမှသာပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ samsung logo ပြန်ဖွင့်ပြီးပြproblemနာကကျွန်ုပ်ကို download mode သို့မသွားစေလိုပါ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသည့်အရာနှင့်ပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရပါကပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်မည်သည့် option ကိုမျှမပြုလုပ်ပါ။ ငါကတန်ဖိုးထားမယ်လို့အလွန်အပူတပြင်းငါ့ကိုကူညီပေးပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါမှာ galaxi s3 ရှိတယ်။ ဒီကနေ့မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ ရုတ်တရက်မျက်နှာပြင်ကမှေးမှိန်သွားတယ်။ သူအဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါသူနဲ့ငါနဲ့ခြောက်လမစိုးရိမ်တော့ဘူး။ အမေရိကန်မှာဝယ်ပြီးဗင်နီဇွဲလားကပါ။ အကူအညီလိုတယ်
၆ လခန့်ကြာပြီး၎င်းသည်အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးကြီးမားသည့် s6 ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင်ပြောသောသေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ သူသည်ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်တစ် ဦး ကိုသင်သိပါကသူသည်ဆဲလ်ဖုန်းရှိအစိတ်အပိုင်းများကိုသူသိပြီးမကောင်းသောအပိုင်းကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ကောင်းတာပေါ့၊ ဆဲလ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးစက်ကိုချန်ထားပါ။ ဝန်အဆင့်တက်လာတဲ့နေရာမှာစတုရန်းအနက်ရောင်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါရှိပါတယ်။ နှစ်ခုအနက်တစ်ခုကမကောင်းတဲ့တစ်ခုပါ။ သင်ကဇောက်ထိုးအောက်ခြေဝန်ကိုမြင်ရင်တစ်ခု။ အဲဒါတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ SIII တွင်ပြhaveနာတစ်ခုရှိသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ဖုန်းသည်အလွန်နှေးကွေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ပင်မဖန်သားပြင်တွင်ရှိနေပြီးမည်သည့်အလုပ်ကိုမဆို နှိပ်၍၊ ဆိုင်စတိုးမှဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားသော application တစ်ခု (သို့) တစ်ခုဖွင့်ရန်အချိန်အကြာကြီးစောင့်ပါ။ system မှ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဖုန်းခေါ်သို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါချက်ချင်းပြန်ကြားချက်ကိုစောင့်နေတယ်။
ငါ emmc ကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည်အန္တရာယ်ရှိနေလျှင်ဖန်သားပြင်ကိုမမြင်နိုင်သောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ဖုန်း samsung s3 mini goldub မော်ဒယ်သည် reboots များနှင့်စတင်ခဲ့ပြီးဘက်ထရီကုန်သွားပြီးပရိုဂရမ်ကအုတ်ပိတ်အမှားနှင့်လုံခြုံသောချစ်ပ်နှင့်မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုမဆိုပြန်လည်စတင်တိုင်းစသည်တို့ကိုပြောပြသည်။
san fernando secta region ချီလီမှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်လွန်ခဲ့သော ၈ လက Samsung Galaxy SIII Mini ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်ထရီသည်ကြာရှည်ခံသည်အထိကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘက်ထရီအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး၎င်းသည်ထပ်တူပြproblemနာနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆဲလ်ဖုန်းကိုစက်ရုံအခြေအနေသို့ပြန်လည်ချထားသည်။ ၎င်းသည် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီး Samsung Galaxy SIII Mini ဟုခေါ်သောအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်လိုဂိုနှင့်ပျက်သွားသည်။ ဖုန်းကို charger ထဲထည့်လိုက်ရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် ... ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
ငါမှာ galaxy s3 mini GT-l8190L ရှိတယ်။ virginityv11 ကို install လုပ်တဲ့အခါ "L" အစား "N" ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါငါအမှားတစ်ခုလုပ်မိတယ်။ ငါ bounce ဖြစ်တဲ့အခါမှာလုံးဝမဖွင့်လိုက်တာကအမှားတစ်ခုလုပ်မိလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကဘက်ထရီထုတ်သည်အထိမှသာပိတ်ထားကြောင့်ကြောင်းလမ်းနေခဲ့တယ်နှင့်ကပိတ်ထားသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာ၎င်းသည် recovery mode သို့ ၀ င်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော် download mode သို့ချက်ချင်းအကူအညီတောင်းပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ Samsung SIII အရောင်ပြာပြhaveနာရှိနေပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့တစ်ခုက x plat Story the Messenger pin ကိုပဲကူးယူပြီးပြီ။ ကျွန်တော် download လုပ်ပြီဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ load လုပ်လိုက်တယ်။ tngo q ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားပါ။dကိုပိတ်ပြီးဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းသို့မဟုတ် soler မှလုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ xfa ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းအချိန်၌ငါ၌ galaxi4ရှိပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ပြုလုပ်နိုင်သည့်နေရာကိုပိုက်ဆန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ Verizon ကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်သည်အမေရိကန်ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ။ ငါထိခိုက်နစ်နာ chip ကိုစီးရီးကဘာလဲဆိုတာသိရန်လိုသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနေ့စွဲနှင့်မည်သူမဆိုသိလျှင်အခြားဒေတာ
ခန့်မှန်းခြေ။ ၎င်းသည်အဖြေမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဖုန်းမသေသေးသောသူများအတွက်ကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သေဆုံးပြီးဖြစ်သည် (၎င်းကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဖွင့်နိုင်ပါကသင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဟုထင်ရသည်) ထို့ကြောင့်၎င်းကိုရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း၏ပြtoနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုခေါ်။ မဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် S3 ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ၀ ယ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၇ ရက်၊ စနေနေ့မှာရုတ်တရက်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို ၂ နှစ်ကြာအသုံးမပြုမီသွားရန် ၄ လရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာပြုပြင်စရာရှိပါသလား၊ ဒါကအရမ်းစျေးကြီးမလား။
ဟဲလိုဟဲ .my ဆဲလ်သည် S3 ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စနေနေ့၊ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင်အလင်းရောင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့်ရပ်တန့်သွားသည်။ ၎င်းသည်ဖွင့်လိုက်သည်။ samsung လိုဂိုနှင့် movi လိုဂိုသာပေါ်လာပြီးထပ်ခါထပ်ခါပေါ်လာသည်။ ငါ့မေးခွန်းက ... ၎င်းသည်ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Samsung သည်ယုံကြည်စိတ်ချရဆဲဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောပါ။
မင်္ဂလာပါစိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် galaxy siii gt9300 နှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်ပ်ကို တင်၍ အခြားချစ်ပ်တစ်ခုကိုထည့်သောအခါနှင့်ပြproblemနာတစ်ခုရှိနေသည်။ တစ်နေ့ထက်မကဂလက်ဆီသို့အသားပေးသောချစ်ပ်သည်ပိတ်ဆို့နေပုံရသည် ... ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ပြproblemနာမျိုးစုံအတွက်အထောက်အပံ့တစ်ခုလိုချင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် s3 အတုလည်းရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်မိုက်ကရိုဖုန်းကိုမတ်တပ်ရပ်။ မထားပါကရပ်တန့်သွားပြီးပြန်လည်စတင်ပါမှ လွဲ၍ ၎င်းတွင်ကုစားမှုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်မူရင်းမဟုတ်ကြောင်းသိသော်လည်း၎င်းကို androy ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ၄.၁.၁ စနစ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏ဖုန်းသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊
MY SAMSUNG GALAXY mini2 ပေါ်မှာအမှားတွေမှားသလား။ လုံခြုံမှုချစ်ပ်မရှိပါ။ ဒီနည်းကိုကောင်းပါတယ်ဆိုးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့မှာ s3 mini ရှိတယ်။ မနေ့ကကတည်းကမတင်သေးဘူး၊ ငါ့မှာ android 4.1.2 ရှိတယ်။ ငါမှာ Samsung GT-S 5510 မတိုင်ခင်ကပဲ၊ ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒါက load မရခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့ငါပြောင်းလိုက်တယ်။ ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလား သေပြီးပြီလား
သူငယ်ချင်းများကျွန်ုပ်၏ sansun s3 ဆိုက်ကိုဖြတ်သန်းသောအခါသူငယ်ချင်းများ k သည်ဖုံးကွယ်မှုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီးအခြားအရာအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်နိုင်လျှင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိပါကကျွန်ုပ်အားကူညီပါ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရိုစီယို ဆေးလ်ဗား ဟုသူကပြောသည်
ငါ၏အ S3 ပိတ်ထားသကဲ့သို့ငါကဖွင့်သောကြောင့်ယခုငါဖွင့်သောအခါ, မျက်နှာပြင်ကအနက်ရောင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
Rocìo Silva သို့ပြန်ပြောပါ
ရာအူးလ် Cano Diaz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုတစ်လကြာကြည့်ပါ။ မျက်နှာပြင်ကအမည်းရောင်ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ ပြုပြင်မှုကယူရို ၁၅၀ ကုန်ကျတယ်။ ငွေတောင်းခံလွှာကသူတို့ဟာချွတ်ယွင်းနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အာမခံချက်ကိုရယူပြီး၎င်းတို့နှင့်အညီပြောလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်တောင်းဆိုချက် ၅ ခုပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်၍ ၎င်းတို့အားလုံးငြင်းပယ်ခံရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Raul Cano Diaz အားပြန်ပြောပါ
ငါဖုန်းကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အလွတ်သွားသည်။ ကျွန်တော်အာမခံချက်မရှိပါ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
ငါဖုန်းကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အလွတ်သွားသည်။ ကျွန်တော်အာမခံချက်မရှိပါ ငါဘာလုပ်နိုင်လဲ ????
ကျွန်ုပ်၏ s3 ကိုသော့ခတ်ထားပြီးအပြာသော့ဖွင့်ပြီးသော့ဖွင့်လိုသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်ဘက်ထရီကိုပြန်ယူပြီးပြန်ဖွင့်ချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်လှည့်သောအခါ s3 နှင့်မော်ဒယ်သာရရှိခဲ့သည်။ စာနယ်ဇင်းခလုတ်ကိုပိတ်ထားသလား volume သည်ဒေတာအချို့ထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းမှာယုတ္တိဗေဒဘုတ်ပြားတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကိုထည့်သွင်း။ မရပါ။ သင့်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်စောင့်နေပါတယ်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ကျွန်ုပ်ဗင်နီဇွဲလားမှပါ။ mini s3 galaxy phone တစ်ခုရှိတယ်၊ ဒီဟာကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ၊ ဖွင့်လို့မရဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ၊ မကျနိုင်တော့ဘူး၊ စိုစွတ်နေတယ်၊
ကောင်းပြီညဥ့်နက်အချိန်တွင်သူငယ်ချင်းဖြစ်ပျက်မှုမှာကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းပိတ်ထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုနေရာများစွာသို့ယူဆောင်လာပြီး၎င်းမှာမည်သည့်အစီအစဉ်နှင့်မျှမရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ပြန်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ပိတ်ထားသည့်အချိန်နှင့်ဘာမှမပြသပါ။ , အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်သာကူညီပေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရယူရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ =) မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဆက်သွယ်ရန်ကျွန်ုပ် ???
ကျွန်ုပ်၏ samsung s4 သည်ငါဘာလုပ်နိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်
အမှိုက်ပုံးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပြန်လည်ဖွင့်သည်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
ကျွန်တော့်မှာ samsung galaxys3 ရှိတယ်။ စတီယာရင်ဘီးတစ်ခုအိုင်ကွန်ပေါ်လာပြီး ၂ မိနစ်လောက်ကြာပြီ။ အဲဒီနောက်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ အောင်မြင်အောင်မအောင်မြင်နိုင်အောင်ဖယ်ထုတ်ပြီး ၅ စက္ကန့်လောက်ပိတ်လိုက်တယ်။ .. ပြီးတော့ဒီနောက်မှငါသည်ငါ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပေမယ့်ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် android လိုဂို၏ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်ရှိ menu နှင့်အတူမျက်နှာပြင်အနက်ရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော loading လုပ်နှင့်ဆဲလ်ဖုန်းဘက်ထရီကုန်သွားသည်အထိ2မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုငါအားသွင်းချင်တယ်ဆိုရင်…အားသွင်းစရာမလိုတော့ပါ၊ မင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲ ...
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မေလကဝယ်ယူခဲ့သော Samsung Galaxy S4 mini ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်သည်။ power + volume up တောင်မဖွင့်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
ငါ့မှာ s2 မဟုတ်ဘဲ3ရှိတယ်၊ မျက်နှာပြင်ကအေးခဲသွားတယ်။ ရွေ့လျားနေတယ်၊ ​​အချိန်လည်းမရှိ၊ ရွေ့လျားနေတဲ့အရာတခုခုရှိတယ်၊ ဘယ် application ကိုမှဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့မရဘူး၊ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဂျက်ဆင် PEREIRA ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကား VENEZUELA မှနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ Samsung S4 MINI GT-I9195 ရှိပါသလား။ ကျွန်တော်လည်ပတ်ရန် ၅ ရက်အကြာမှာကျွန်တော်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာနဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်မိတာဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ သေတဲ့ဆာရာကနေသင့်ကိုသူတို့ပြောကြတယ်၊ အဖြေကဘာကိုကူညီပေးမလဲ
JACKSSON PEREIRA သို့ပြန်ပြောပါ
ဟဲလို၊ ကျွန်ုပ်သည်ကြာရှည်စွာရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုသိမ်းဆည်းထားသည်။ သူတို့ကဖွင့်လို့မရဘူး ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစိတ်ရင်းစေတနာကောင်းစွာနဲ့ပြန်လည်ရယူလိုသည်။ အဲဒါပြီးပြီလား
Wilber Perez အမ် ဟုသူကပြောသည်
samsung gt-i8190l ကိုကျွန်ုပ် charger အားချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းကိုမဖွင့်ပါ။
Wilber Perez M. အားပြန်ကြားချက်
Buenas tardes ။ ငါအားသွင်းနေတုန်းမှာငါ့ရဲ့ S3 mini ကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်။ ငါဖြုတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ရန်၎င်းကိုပိတ်ထားလိုက်သည်။ ငါက၎င်းကိုဘက်ထရီအားသွင်းရန်ချိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိသို့မဟုတ်၎င်းသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အားသွင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူကသေပြီလိုပဲ ... ရောဂါလက္ခဏာပြနိုင်အောင်သင်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
အိန်ဂျယ် Ernesto Hache ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်တော်မှာ SMSUNG S3 ရှိတယ်။ ရုတ်တရက်သူကကျွန်တော့်ကိုမလည်ပတ်စေချင်ဘူး။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုအားမနည်းစေချင်ဘူး၊ ဒီပြPROနာကိုငါဖြေရှင်းဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။
Angel Ernesto Hache အားပြန်ပြောပါ
ဟဲလိုကျွန်တော့်မှာ Samsung SGH-T399 ရှိပြီးလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က၎င်းကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းသည် T-Mobile တံဆိပ်ပါသောအဖြူရောင်နောက်ခံထားသည့်နေရာအထိသာအားသွင်းသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပျက်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားထင်မြင်ချက်ပေးလိုပါသည်။
ငါ့မှာ samsung s3 ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ ဘက်ထရီက ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းရောက်တဲ့အခါမျက်နှာပြင်ကတောက်ပလာပြီးပိတ်သွားတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ဘက်ထရီအသစ်က ၀% သို့ရောက်သွားတယ်။ ဒါကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ Sansung mini s III ဖုန်းသည်ရုတ်တရက်အလုပ်လုပ်ခြင်းရပ်သွားသည်၊ ၎င်းသည်မဖွင့်၊ ၎င်းသည်ဖွင့်ခြင်းနှင့်တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားအကူအညီလိုအပ်ပါ။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်တွင်ဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်ခြင်းသည် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ သို့မဟုတ်ပါကရော်ဘာသို့မဟုတ်ကားတာယာနှစ်ခုထက် ပို၍ စျေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အထီးကျန်နေပါသည်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား .. venezuela မှဆန်ဒရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sandra ကို အကြောင်းပြန်ပါ။
နေ့လန် ojeda ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနံနက်ခင်း Samsung S3 ကိုပိတ်ပြီးပြန်မဖွင့်တော့ပါ။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားပြီး Processor အရပြောရရင်ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါ။
daylan ojeda သို့ပြန်သွားပါ
Android3တွင် Samsung Galaxy S4.1.2, Root and Recovery
Motorola Razr i ကို UK ရှိ Jelly Bean ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်